Filtrer les éléments par date : dimanche, 05 juillet 2020
dimanche, 05 juillet 2020 22:27
Covid-19: Mandray fepetra ny Faritra Menabe
Manoloana ny tsy fahasalamana nahazo ny Filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy sady Filohan'ny FFKM izay nivahiny sy nitarika fivoriana teto Morondava dia nandray ireto fepetra manaraka ireto ny ivon-toeram-pibaikoana Covid-19 Menabe izay hampiarina manomboka ny alahady 05 jolay 2020.
- Mikatona avokoa ireo fiangonana efatra eto amin'ny Ditrikan'i Morondava, dia ny fiangonana Loterana, Katolika, FJKM ary Anglikanina.
- Mitsahatra ny zotra mampitohy an'Antsirabe sy Morondava,,afaka mandeha kosa ireo fiara mpitondra entana ilain'ny mponina andavan'andro.
- Miverina ny "couvre-feu" izay manomboka amin'ny 10ora alina ka hatramin'ny 4ora maraina.
Izany no natao dia mba hisorohana ny fiparitahan'ny valan'aretina Covid-19 aty amin'ny Faritra Menabe.
(Loharano Faritra Menabe)
Tamin’ny tambazotra sosialy no nanaovan’i Kanye West fanambarana, ny sabotsy 4 jolay, fa hirotsaka hofidiana filoham-pirenena any Etazonia ny tenany. Hifaninana amin'ny filoha amperinasa Donald Trump izany ity farany.
Mpihira rap sady mpanefoefo, mpitantana trano famokarana ary vadin’ilay mpilalao sarimihetsika Kim Kardashian i Kanye West.
dimanche, 05 juillet 2020 20:07
« Village Voara » Andohatapenaka: Naterina ao ilay fiara nahitana faty tratra tao Sakaraha sy ireo olona 8 tao anatiny
Narahin’ny Zandary hatrany ampiaingana tao Sakaraha omaly ka hatrao amin’ny « Village Voara » Andohatapenaka nitondrana azy ilay fiara Toyota Fortuner iray sy ireo olona miisa valo nentiny. Tratra teo amin’ny sakana ara-pahasalamana teo Sakarahana amin’ny lalam-pirenena io fiara io ny zoma 3 jolay, rehefa nitondra vehivavy, 28 taona, narary saingy maty an-dalana tao anaty fiara raha hiazo an’i Toliara.
Matin’ny mosavy nataon’olona ilay vehivavy araka ny fanambaran’ny fianakaviana fa tsy aretina Covid-19. Na izany aza dia nalevina ao Sakaraha ilay faty araka ny toromariky ny foibem-pibaikoana ny Covid-19 Toliara, ilay fiara sy ireo olona miisa valo niaraka tamin’ilay faty kosa naverina nankaty Antananarivo, toerana niaingan’izy ireo, ary dia navantana avy hatrany ao amin’ny « Village Voara » Andohatapenaka.
Natokam-ponenana ary hatao fitiliana ireo olona miisa valo, nafendrahana fanafody kosa ilay fiara.
Tsy nifampikasoka tamin'ireo kosa ireo Zandary nanaraka azy ireo.
Hambara ny alatsinainy 6 jolay ireo minisitra handrafitra ny governemanta Jean Castex. Hisy mpikambana roapolo eo izy io raha ny fantatra hatreto. Mbola manohy ny fakan-kevitra amin’ireo ankolafin-kery samihafa ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny praiminisitra Jean Castex androany.
Ny zoma 3 jolay teo no nanendrena an’i Jean Castex ho praiminisitra rehefa nametra-pialana i Edouad Philippe noho izy lany Ben'ny Tanàna Le Havre.
dimanche, 05 juillet 2020 16:26
Analamanga: 02 nosamborina, fiara 9 nampidirina ambalam-pamonjana
Tsy nandefitra tamin’ireo minia mandika ny fepetra ara-pahasalamana tsy hiparitahan’ny tsimok’aretina Covid-19 ny Zandarimaria.
Ny tontolo andron’ny sabotsy 4 jolay izao, dia fiara miisa 9 no nampidirina ambalam-pamonjana na « fourrière » ka fiara fitateran’olona ny 2 amin’ireo, kamiao ny 1, firan’olontsotra ny 6 ary Bajaj ny 1. Fitondrana olona mihoatra ny tokony ho entiny, tsy fanaovan’ny mpandeha aron-tava, tsy fisiana « gel désinfectant », fitondrana olona an-tsokosoko ary tsy fisiana fiantohana « assurance » no santionany amin’ny fandikan-dalana nanasaziana azy ireo.
Nisy ihany koa mpamily roa nosamborina noho ny fahitana fa mampidi-doza ny fomba nitondrany olona.
dimanche, 05 juillet 2020 15:53
Finoana Katolika: Inona ireo fombafomba sy hevi-baventy lamesa na Fotoam-pivavahana Katolika?
Ny lamesa Katolika dia nalaina tamin'ny fiaraha-misakafo farany nataon'i Kristy tamin'ireo mpianany ny alakamisy masina talohan'ny nahafatesany.
Md Lioka 22, 19-20
"19- Rahefa izany, dia nandray mofo izy, ka nony efa nisaotra dia namaky azy, sy nanome azy ireo nanao hoe: Ity no vatako, izay atolotra ho anareo; manaova izany ho fahatsiarovana ahy.
20- Dia nataony toy izany koa ny kalisy rahefa avy nihinana, ka hoy izy: Ity kalisy ity no fanekena vaovao amin'ny rako, izay alatsaka ho anareo."
Arak'izany dia miorina tanteraka amin'ny Finoana fa zanak'Andriamanitra i Jesoa Kristy, izay tonga olombelona ka namonjy an'izao tontolo izao ny finoana Katolika.
Tafiditra ao anatin'ny tanjona ifantohan’ny faritra Atsinanana amin’ity taom-piasana 2020 ny sehatry ny fambolena.
Ny tetik’asa AGRICOOP no anisan’ny lohalaharana amin’ny fameloman’aina ny seha-pamokarana BIOLOJIKA. Vina sy fanamby lehibe no apetraky ny faritra mirahavavy NORMANDIE (Frantsa) sy ATSINANANA, mametraka drafi-piarahamiasa anatin’ny tontolon’ny COPERATION DECENTRALISEE.
Singa ihany ny AGRICOOP raha ny sehatry ny fampiroboroboana ny fambolena anatin’ity seha-piarahamiasan’ny faritra roa tonta no resahina.
Ny tanjon’ny tetik’asa AGRICOOP, raha fintinina, dia ny fampivoarana ny famokarana, famarotana ary fanondranana ny voankazo (fruits) sy ny hanitra (épices) vokarina ato anatin’ny faritra Atsinanana, mba hahazo vahana izany eo amin’ny sehatry ny « Commerce Equitable ».
dimanche, 05 juillet 2020 08:37
Distrika: Ambohidratrimo, Andramasina, Anjozorobe, Ankazobe, Antananarivo Atsimondrano, Antananarivo Avaradrano, Antananarivo Renivohitra, Manjakandriana
Isan'ny mponina: 3,618 millions (2018) - Densité 207 hab./km2
Velaran-tany: 1 744 500 ha = 17 445 km2
(Loharano Wikipedia, sary nindramina)
dimanche, 05 juillet 2020 08:33
Praiminisitra Ntsay Christian: Misy misandoka amin’ny facebook
Nanao fanambaràna ampahibemaso, amin’ny anarany manokana sy amin’ny maha-lehiben’ny Governemanta azy, ny Praminisitra Ntsay Christian, noho ny fahitana fampiasana hosoka eny amin’ireo tambajotran-tserasera, indrindra fa ao amin’ny tambajotra facebook, fa tsy mbola nanana ary tsy nampiasa « facebook » mihitsy ny tenany, ary tsy tompon’andraikitra amin’izay mety ho fampiasàna ny anarana « Christian Ntsay » na « Ntsay Christian » ao amin’izany tambajotra izany.
Manantena ny olom-pirenena rehetra ho malina hatrany ny Praiminisitra, mikasika io resaka io.
dimanche, 05 juillet 2020 08:30
Filankevitry ny Minisitra: Hitohy ho anio
Hisy Filankevitry ny Minisitra anio alahady 5 jolay ho tohin’ny efa natao omaly. Hisy aorian’izany ny fandaharana manokana hanazavan’ireo minisitra isanisany avy ireo fepetra maro isan-tokony sy isan-tsokajiny araka ny sehatra misy azy ireo avy.